Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ Enjoy7Plus ကို 4GB RAM နှင့် 64GB သိုလှောင်မှုဖြင့်အဆင့်မြှင့်သည် Androidsis
၎င်းကိုတရားဝင်သီတင်းနှစ်ပတ်မတိုင်မီကတရားဝင်စတင်ခဲ့သော်လည်းအာရှကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည် Huawei သည် 7GB RAM ဖြင့် Enjoy4Plus phablet အသစ်ကိုအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သည် အဲဒါကပိုပြီးစွမ်းအားပေးတယ်။
Huawei Enjoy7Plus ကို10ပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့်နည်းပညာအချက်အလက်များအရအလွန်ကြီးမားသည့် ၇.၅ လက်မမျက်နှာပြင် 7,5p resolution၊ Qualcomm Snapdragon 720 ပရိုဆက်ဆာ၊ 435 GB RAM နှင့်3GB internal storage တို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းကြီးသည်ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူကကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းကဲ့သို့သောအနံ့ထွက်သည့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဤသဘောမျိုးဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်Saturdayပြီလ ၂၂ ရက်၊ စနေနေ့တွင် Huawei Enjoy 22 Plus ဗားရှင်းသစ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဤသည် phablet သည်ယခင်ကြေငြာခဲ့သောပုံစံနှင့်အတူတူပင်အင်္ဂါရပ်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသောချွင်းချက်ဖြစ်သည် ၄ GB RAM နှင့်4GB Internal Storage ဖြစ်သည်.
အမှန်မှာ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများသည်အရည်အသွေးနှင့်အလေးချိန်ပိုမိုမြင့်မားလာသည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုသူများစွာအတွက်ကန ဦး 32GB သည်မလုံလောက်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏လုပ်ဆောင်မှုကို အောင်မြင်သောလှုပ်ရှားမှု.
Huawei Enjoy7Plus ဗားရှင်းနှစ်ခုလုံးမှာအတူတူပါဘဲ 12 MP အဓိကကင်မရာနှင့် 8 MP ရှေ့ကင်မရာ။ နောက်ကင်မရာရဲ့အောက်ဘက်မှာတော့ရှိတယ် လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ Huawei မှကုမ္ပဏီက ၄ င်း၏အာမခံချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ၀.၂ စက္ကန့်အတွင်းဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ပေးနိုင်သည်.
၎င်းကိရိယာသည်ဒီကိရိယာတွင်ကတိပေးထားသည့်ကြီးမြတ်သည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ 4.000 mAh ဘက်ထရီဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ရန်နာရီ ၂၀ ကြာသည်။
အတွင်းပိုင်း၊ အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat Huawei EMUI 5.1 ၏ကိုယ်ပိုင်အလွှာအောက်တွင်၊ ရရှိနိုင် တရုတ်၊ ငွေရောင်၊ အပြာ၊ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့်ရွှေတို့ဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄၇ နှင့်ညီမျှသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ Enjoy7Plus ကို 4GB RAM နှင့် 64GB သိုလှောင်မှုဖြင့်အဆင့်မြှင့်သည်